2 Askari oo Saakay Toogasho lagu Dilay Magaalada Gaarisa | KEYDMEDIA ONLINE
2 Askari oo Saakay Toogasho lagu Dilay Magaalada Gaarisa
Nairobi (KON) - Koox hubaysan ayaa goor dhowayd waxay Toogasho ku Dileen 2 Askari oo ka tirsan Ciidanka Kenya eek u sugan Magaalada Gaarisa Waqooyi-bari Kenya, Dilkaas oo ka dhacay meel 10tilaabo u jirta “Garissa High School”.
Kooxdii Dilkaan fulisay ayaa Durbadiiba ka baxsaday Ciidamadii meesha ka ag dhawaa lamina garanayo meesha ay u baxsadeen iyo meesha ay markii horaba ka yimaadeen.
Asbuucii la soo dhaafay ilaa Maantay oo Isniin ah waxaa Togasho lagu dilay 5 Askari oo ka tirsanaa Booliska Kenya.
Xaalada Amaanka ee Dalka Kenya Guud ahaan Gaar ahaan Magaalo Madaxda Nairobi ayaa noqotay mid aad looga dayriyey. Bal fiiri: Qaraxyada isdabajoogaa eek a dhacay Xaafadda Eastleigh ee Magaalada Nairobi.5 Qof ayaa ku dhimatay, 25 waay ku dhaawacmeen Qarax oo Shalay ka dhacay Xaafadda Eastleigh ee magaalada Nairobi.